APPLE "ZHIGULEVSKOE": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA, XEERARKA BEERITAANKA IYO DARYEELKA - GEED GEEDEEDKA
Baahida loo qabo tufaax ayaa la arkaa wakhti kasta oo sanadka ah. Laakiin gaar ahaan xilliga jiilaalka iyo horraanta gu'ga, waxaan sidoo kale dooneynaa tufaax casiir leh. Noocyada tufaaxa xagaaga horeba waa la cunay. Waxaad dooran kartaa tufaax la soo dhoofiyo, laakiin way qaali karaan, badanaaba taahid. Sidaa darteed, jacayl gaar ah ee bannaanka u uqalmeen noocyo dayrta, taas oo mar dambe bislaadaan oo si fiican loo kaydiyaa. Waa in noocyada noocan ah ay khuseeyaan Geed geed "Zhigulevskoe". Miro, dhadhan fiican leh oo udambeysan ayaa dillaacey dhammaadkii Sebtembar waxayna hayaan dhamaan sifooyinkooda illaa bilowga Maarso.
Taariikhda geedka tufaaxa "Zhigulevskoe".
In ka badan 80 sano ka hor, oo ku yaala xarunta ku-meelgaarka ee Kuibyshev, nadiifiye Sergeý Pavlovich Kedrin (1905-1981) ayaa soo saaray laba nooc - waa Ruushka Ruushka ah ee Borovinka vulgaris iyo transatlantic (oo laga soo qaaday USA) Wagner Prize. Hadafku wuxuu ahaa sidii loo heli lahaa geedka tufaaxa ee dhakhso u koraya oo leh wax-soosaarkooda sare, adkaysi u ah cudurrada iyo cayayaanka, awood u leh inay bixiyaan fiitamiin muddada qaboobaha oo dhan. Geedka kowaad ee kala duwanaanta xilliga dayrta cusub waxaa la beeray 1936. Tan iyo markaas, noocyo kala duwan oo tufaax ah "Zhigulevskoe" ayaa caan ku helay kaliya ee Russia, laakiin sidoo kale in dalalka kale ee adduunka.
Sharaxaada kala duwan ee tufaaxa "Zhigulevskoe"
Noocyada cusubi waxay isku daraan sifooyinka ugu fiican ee waalidkood. Laga soo bilaabo "Abaalmarinta Wagner" waxay heshay dhalidda iyo qadarinta, dhadhanka dabeecadda, kartida miraha si ay u sii haysato sifooyinka wanaagsan ee illaa February. Laga soo bilaabo "Borovinka caadiga ah" - koritaanka degdegga ah iyo kobaca geedaha, qiyaasta dhexdhexaadka ah, iska caabida cudur, fududaan iyo iska caabin qabow. Apple "Zhigulevskoe" wuxuu leeyahay sharaxaad soo socota.
Dhirta dhirta ee noocyada kala duwan waxay leeyihiin guryaha soo socda:
koritaanka degdegga ah. Sanadka afraad ka dib marka la beero, dalagga ugu horreeya waa la goostay, lixaad iyo toddobaad, geedka tufaaxa ayaa si buuxda u kobcaya (dhalid ilaa 250-300 kg oo tufaax ah);
koritaanka dhexdhexaadka ah (koraan ugu badnaan 3 m);
pyramidal non-corona ballaaran. Lafaatiirta ayaa kor loo qaaday, naadir. Jilicsanaanta iyo hawada hawada ee taajka ayaa wanaagsan;
Xubno ka soo jeeda isku dhafka hoose Dhallinyaro cagaaran oo madow oo toosan;
caleemaha waa weyn, qoyan-qoyan, oo leh geesaha cufan iyo suufka cagaaran qaniga ah. Talooyinka caleemaha waa la xarrimay;
ubaxyada ubaxyada iyo ubaxyada waaweyn;
jilicsan madow mugdi ah.
Waa muhiim! Keli tufaax "Zhigulevskoe" toosi Maarso-Abriil. Haddii ay dhacdo dhaxanta guga waxaa jira khatar dhaawac ah.
Tufaaxa darajadani waxay ku kala duwan yihiin dhar ganacsi oo heer sare ah:
Cabbir wayn, hal-cabbir (celcelis ahaan, miisaanka tufaaxu waa 150 illaa 300 g);
qaabka wareegsan (oo leh tubbo dhif ah);
midhaha ayaa leh mid adag, diirran oo daboolan;
midabkiisu waa midab huruud ah, casaan, oo leh cadho cad;
miraha gabbaldayaha - bunni madow, yar yar;
saxarada ayaa leh midab kareem; hindise, oo leh qaab qaab-qaabaysan;
dhadhamin - dhadhanka macaan-macaan;
cadeeyeen dhadhan fiican ee tufaaxa;
Ma taqaanaa? Xilliga sii kordhaya ee geedka tufaaxa "Zhigulevskoe" waa 175 maalmood.
Goobta "Zhiguli" waxaa ku yaal dhowr hanti oo muhiim ah. (kuwaas oo noocyo kala duwan loo siiyay abaalmarin caalami ah):
dhalidda sare (ugu sarraysa - 10 sano);
koritaanka degdegga ah ee geedka iyo qulqulka;
Suuq-geynta sare ee midhaha;
sifooyinka wanaagsan ee dhadhanka;
caabbinta cudurada qolofta;
Miraha u bislaaday in ay laamood - beergooyska si sahlan loo beeray iyada oo aan waxyeello tufaaxa;
Nolosha shelf dheer (2-3 bilood) iyada oo aan la dhadhamin dhadhanka.
Ka mid ah cilladaha waa in la sheego:
dhexdhexaadnimada jiilaalka (dhaxal ka yimid Maraykanka "Wagner");
geedaha jiraa waxay midho dhaleen ka dib xilli ama laba, miraha hoos u dhac ku yaraada;
u nuglaanshaha aboorka.
Waxay sidoo kale xiiso u tahay in ay ka akhriso noocyada kale ee geedaha tufaaxa, sida: "pear Moscow", "haragaaga", "Orlik", "Shtreyfling", "Dream" iyo "Semerenko".
Xeerarka dooranaya geedo yar yar marka aad iibsaneyso
Waxyaabaha lagu beero waxaa si fiican loogu iibsaday guryaha xanaanada gaarka ah ama kuwa iibiya aaminaada. Dhirta waa in lagu soo xushaa dhirta hal ilaa laba sano jirka ah (laga bilaabo da'da saddex jir, waxay qaadataa xidid ka sii daraysa waxayna noqotaa mid u nugul fungi). Kobcinta waa in la kariyaa. Doorashada geedka tufaaxa, waa in la baaraa. Waxaa jira calaamadaha soo socda ee geedo tayo leh:
Nidaamka xididsan ee wanaagsan (ugu yaraan laba xidid oo qalafsan (30 cm kasta) iyo xididdada fibroobka ah);
barkad jilicsan (hoosteeda oo qoyan dharka qoyan, si aad u eegto inaad u baahan tahay si yar oo xoqan jilif);
bogga bogsiisay bogsashada waa in la dhejiyaa oo lagu daboolaa jilif;
Xiisad caadi ah oo aan caadi ahayn oo aan waxyeello laamaha laamaha qalfoof ah ee foosto ah.
Ma taqaanaa? Thanks to jilayaasha, dhirta tufaaxa badankoodu waxay gaadhaan height ah 2-3 mitir. In dabiiciga ah, geedo tufaax ah koraan karaa ilaa 15-20 mitir.
Apple "Zhigulevskoe" wuxuu bilaabmaa inuu midho dhasho sannadka afraad, laakiin xaalad ah in dhirta iyo daryeelka ee geedaha tufaaxa si sax ah loo sameeyey.
Waqtiga ugu fiican ee dhulka
Beerta waxay ku talinayaan in la beero geedo tufaax ah dhammaadka Abriil (marka dhulku kor u kaco), laakiin si aad u diyaariso godadka beeritaanka xilliga dayrta (dhulka waxaa ku jiri doona oksijiin).
Xulashada goobta degelka: shuruudaha loogu talagalay ciidda iyo iftiinka
Geedka geedka wuxuu jecel yahay carrada bacrin ah oo leh hoose dhulka hoose iyo dheecaan wanaagsan. Xayawaanka dhexe ee loamy ayaa ugu haboon.
Wixii koritaanka caadiga ah ee geedka tufaaxa "Zhigulevskoe" iyo beerista warshad wanaagsan oo goosashada waxay u baahan yihiin inay bixiyaan qorrax qoto dheer. Doorashada meel loogu talagalay sapling, waa inaad ka fogaataa meelo har leh. Si looga hortago dhirtu in ay isku qasaan midba midka kale, ka tag masaafada 4-5 mitir u dhexeeya.
Hoyga dhulka ayaa si fiican loo goostay - dhowr bilood. Shaqada diyaarinta ee goobta waxay ku xiran tahay bacriminta ciidda. Haddii ciidda ay wanaagsan tahay, ka dibna bacriminta waa in aan la daboolin, waa ku filan in god qodo 60 × 60 × 60 cm, loosen hoos ugu 15-20 cm oo ka tago hawada. Haddii ciidda saboolka ah, ka dibna waa in la bacrimiyo. Qoto dheer ee godadka beeraha ka dibna wuxuu noqon doonaa 1 m. Lakabka sare (dhulka madow), laga soocay godadka, waa in lagu daraa peat (1-2 baaldiyo), superphosphate (300 g), chloride potassium (40 g), ash (300 g). Bacriminta-kiimikada leh ee ku jira Bacriminta ma khuseeyaan - waxay ku gubi doonaan gubashada xididada.
Ka hor inta beeritaanka geedka tufaaxa, waa lagama maarmaan in la diyaariyo geedo. Haddii geedka tufaaxa ah laga iibsado xididada furan oo ay qalajiyeen, ka dibna waa in lagu qooyay biyo mudo ah 4 ilaa 12 saacadood (waxaa suurta gal ah in badan) si loo soo celiyo qoyaanka lumay. Talooyinka laysku halleyn karo ama jabay waa in la jarjaraabiyaa siiban (hooji saliidaha lagu rusheeyey dhoobo). Fidiyeyaasha oo xididdada ku jira miyir-beelka dhulka waa in si fudud looga saaraa burka.
Geedo beerto ayaa ka kooban hawlaha soo socda:
qulqulaya qulqulka hoose ee ceelasha - jajabyada lebiska, ciid qalafsan;
godad ku buuxi saddex meelood laba meel oo leh isku dhaf ah;
Waa muhiim! Peg, kaas oo loo isticmaalo marka laga beerto seedling ah, waa in lagu caddeeyo oo qoryaha dabka ah on dabka, - waxay hoos u dhigeysaa galka qoyaanka.
Geli xarigga xuddunta oo ku dheji saabuun. Qoorta xididka waa inay soo baxaan 5-7 cm oo ka sarraysa heerka ciidda;
si siman u qaybiyaan xididada godadka, isku day in aadan toosin iyo, si joogto ah isafgaradka, kula saydhaa leh ciidda bacrin ah;
saar foornada foornada;
dalool (dal dhul ah oo dhisto barkin adoo raacaya wareegiisa) kuna shub 3-4 baaldiyo biyo ah;
Duufaan illaa 7 cm (peat, caleemo, caws, khudaar). Beeridda geedo leh nidaam xidhan oo xidhan ayaa fudud - u dhig qolka oo dhan god, ku shub dhulka iyo biyo.
Dhirta geedaha tufaaxa, waxaad sidoo kale ku beeri kartaa khudaar, khudrado, fawaakih, juus ah, jeeriga, jeeriga iyo cawska beertaada.
Xeerarka daryeelka xilliyeed ee geedaha tufaaxa "Zhigulevskoe"
Geedku wuxuu u baahan yahay daryeel habboon. Waxaa ka mid ah waraabinta, bacriminta, manjooyin, ilaalinta cudurrada iyo cayayaanka.
Fasalka "Jigjevskoe" - waa noocyo kala duwan oo isku dhafan (geedo yaryar oo tufaaxa ah ayaa leh pollen by ay manka u gaar ah sida noocyo is-bacrin ah). Noocyada xilliga dayrta ("Borovinka", "Antonovka", "Kutuzovets", "Anis striped", iwm) waxay si gaar ah ugu wanaagsan tahay doorka loo yaqaan pollinators. Waxaa muhiim ah in tufaaxada deriska ahi fogaanayaan wax ka badan 50 m.
Miraha "Zhigulevskoe" ayaa aad u adkaysi u ah in uu qolofta iyo dhexdhexaad u yeesho cudurrada kale.
Khatarta ugu muhiimsan
jabinta xayrta budada ah (caleemaha waa in lagu daaweeyaa xalalka Topaz ama Scor - 2 ml 10 ml oo biyo ah);
aboor (jiilka labaad). Wixii horey loo sii deynayo ubax, geedka tufaaxa waa in loola dhaqmo laba jeer (oo leh fasax usbuuc ah) oo leh qajaar geedeed. Wuxuu ka caawiyaa cayayaankan iyo cayayaanka qorraxda, kuwaas oo ku xiran laanta geedka. Sidoo kale waa inaad si joogto ah uga saartaa caleemo dhacday;
cayayaanka kale. Cabbiraadyada - xoqan guga ee dogobka (geedo waaweyn oo tufaax ah oo leh cagaha, kuwa jiran oo leh lime), ku xoqin xal kariye ah oo karbofos ah (70 g halkii 10 l) kadib markii geedkii tufaaxu uu ubaxday;
qorrax madoobaaday. Marka laga soo bilaabo gubashada dillaacyada jilicsan ayaa muuqda, xajmiga ayaa soo baxa, meesha caanaha iyo cayayaanka waxyeello gala. Goobta gubashada waa in la daaweeyaa - gooyso waxyeellada mindi fiiqan oo ku dabool leh garoonka beerta. Laga soo bilaabo gubashada jirridda waxay ka caawisaa waraaqaha iyo waraaqaha dheeraadka ah ama kartoonada, kuwaas oo ku xiran meelaha bannaan ee jirkooda;
jilbaha nibbling leh xabaalaha iyo jiirka. Si loo ilaaliyo dayrta, dogobka tufaaxa waxaa lagu daboolaa laamo laamiyo, duufaan dareemay, iwm.
Daryeelida geed geedka tufaaxa ah waxaa ku jira waraabin joogto ah (2-3 baaldiyo geed). Waxaa fiican inaad soo saarto subixii hore ama fiidkii. Celcelis ahaan, 5-6 waraabinta bishii ayaa loo baahan yahay, iyo inta lagu jiro abaarta, maadaama ay ciidda ku qoyaan.
Habeenkii waa faa'iido leh in la qaato rusheynta Waxay kaloo u adeegtaa sidii looga hortagi lahaa cayayaanka.
Xakamaynta joogtada ah ee ciidda agagaarka xariiqda xididka ayaa u oggolaanaya in ay hagaajiyaan hawada iyo biyaha suubban ee ciidda. Marwalba waxaa mar walba la sameeyaa ka hor inta aan la waraabin waraabin kasta, taas oo ah biyaha aan la joogin, iyo xididada waxay helayaan oksijiinka. Si aad ugu hesho helitaanka oksijiin, bacriga ku talinaynaa isticmaalka a crowbar ah si aad u sameyso dhowr punctures ee ciidda 40 cm qoto dheer ku wareegsan wareega taajkii geed tufaax ah.
Labada ama saddexda sano ee ugu horeysay geedo lagu beeray ma bacrimiyo. 3-4 sano kadib, geedo yar yar waxay u baahan yihiin quudinta (ugu yaraan saddex jeer sannadkii):
guga dhexe - 0.5 kg oo ah HOL per tree (digada rotated loo isticmaali karo);
xagaaga (marka ubaxu bilaabmayo) "Zhigulevskoe" waxay ubaahan yihiin bacriminta nitrogen (barashada waxaa lagu dhejiyaa baakadka alaabada). Xayawaanka shimbiraha ah ayaa sidoo kale soo galaya iyagoo isticmaalaya (isku-darka rubuc baaldi leh saddex meelood oo biyo ah);
ka dib markii ubax - nitrofoskoy bacriminta.
Laga soo bilaabo July, quudiyo geedka tufaaxa ee aan loo baahneyn. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo bacriminta ciidda. Dharka ugu sarreeya ayaa la samayn karaa marar badan oo xayawaanka qani ku ah, carrada carrada ama saboolka ah - sannadkiiba.
Waa muhiim! Bannaanka u khibrad leh, oo ka hadlaya sida aad u kordhin karto dhalidda ee "tufaax", waxaa lagula talinayaa in ay dalbato nitrophoska bacriminta. Tani waxay kordhinaysaa dhalidda 10-15%.
Gooyo waxay nidaamisaa ma aha oo keliya qaabka taajka, laakiin waxay sidoo kale saameysaa xajmiga midhaha, sonkorta ku jirta. Waxay bilaabaan gooyaa sannadka ugu horreeya ee nolosha - ka hor intaan la beeri, laamihii yaryar ayaa la yarayn karaa (ilaa 30%).
Samee manjooyin guga (ugu dambayn Abriil). Samee qalab fiiqan. Goobaha la dhigo waa in lagu daweeyo beerta beerta. Laamaha qalalan isla markaaba, dhallinyarada - maalinta xigta. Qorsheynta manjooyin geedeedka Apple waa inay ka takhalusaan:
caleemaha qalalan ama jirran;
caleemaha soo koraya gudaha taajka;
caleemaha soo koraya.
Isla markaa, wax ka badan ¼ ka mid ah dhammaan waa in la tirtiraa.
Xilliga kowaad ka dib markii laga beerto, jar dhammaan ubaxyada. Xilliga jiilaalka ee ugu horreeya, 50% dhammaan miraha ilaa 3 cm dhexroor waa in laga saaraa.
Diyaargarowga xilliga qaboobaha ee geedka tufaaxa ee Zhigulevskoye waxaa ka mid ah:
hilling, loosening iyo mulching of goobada jirridda;
daaweynta qaabka leh xal of sulfate ferrous;
ku duuduubista xashiishka, foornada, laamiyo gran ah, iwm oo leh weel daboolan si looga ilaaliyo barafka iyo bakaylaha.
Ma taqaanaa? Qalabka wax lagu qurxiyo ee geedka kirismaska ​​waxaa laga helaa asal ahaan tufaaxii dayrta. Bartamihii qarnigii 19aad ee Yurubta Galbeed waxaa jiray beerihii saboolka ahaa. Tan iyo markii uu dhaqan ahaan jiray Faransiis si loo qurxiyo geedka kirismaska ​​leh tufaax casaan ah, muraayadaha muraayadaha ah ayaa loo soo bandhigay si loogu badalo miraha dhabta leh tufaax muraayada cas.
Kala duwan waxaa loo yaqaana sida sarreeya - ilaa 250-300 kg oo tufaax ah ayaa laga goyn karaa geed, iyo daryeelka saxda ah iyo manjooyin geedo tufaax ah ayaa u oggolaan doona miraha inay koraan cabbirka. Goynta sida caadiga ah waxay bilaabataa ka dib Sibtambar 5 (xilliga qalalan - dhammaadka August). Miraha waa in la daaweeyaa waxoogaa yar, baaluqnimo buuxda ayaa iman doonta 14-28 maalmood kadib marka la soo qaado.
Kaydinta tufaaxa noocyada kala duwan waxaa fududeynaya xaqiiqda ah in ay gacanta ku soo goosteen (ma waxyeelo marka la tuurayo). Goosashada waa in lagu keydiyaa heerkul ah 0 ilaa 4 ° C. Ku dhaq ama tirtirka waa inaanay noqon - tani waxay burburinaysaa dusha ka ilaalinta diga. Tufaax kasta waxaa lagu duuduubay warqad, ku rid kartoon ama sanduuq alwaax ah oo leh hawo wanaagsan oo ku shubtay balka. Nolosha sheyga iyada oo aan lumin dhadhanka iyo hantida faa'iidada waxay u dhaxeysaa 70 ilaa 90 maalmood.
Ma taqaanaa? Dhirta Apple ee kala duwan ee Zhigulevskoe aan ka badnayn 20 sano.